China 2108 AWWA C504 C516 Double Eccentric Butterfly Valve ụlọ ọrụ na ndị nrụpụta | Convista
Facilitieslọ ọrụ anyị ejikere nke ọma na njikwa njikwa ogo dị elu na ọkwa niile nke ọgbọ na-enyere anyị aka ịkwado afọ ojuju zuru ezu maka 2108 AWWA C504 C516 Double Eccentric Butterfly Valve, Ngwa niile na-abịa ezigbo mma yana ọrụ zuru oke mgbe ahịa gachara. Market-gbakwasara na ndị ahịa na-agba mbọ bụ ihe anyị na-anọ mgbe. Jiri ezi obi na-atụ anya inwe mmeri-Win!
Anyị mma-onwem ụlọ ọrụ na ahụkebe n'elu àgwà management niile nkebi nke ọgbọ na-enyere anyị na-ekwe nkwa ngụkọta asịwo afọ ojuju maka Cast Steel Ugboro abụọ Eccentric Butterfly valvụ, Ugboro abụọ Eccentric Butterfly valvụ, Ha na-na inogide ịme ngosi uwe na-akwalite ọma n'ụwa nile. Ọnweghị n'okpuru ọnọdụ kpamkpam isi ọrụ na a obere oge, ọ bụ a kwesịrị gị onwe gị nke kediegwu àgwà. Ndi ụkpụrụ nke Prudence, arụmọrụ, Union na Innovation na-eduzi. azụmahịa ahụ na-agbasi mbọ ike iji gbasaa azụmahịa mba ụwa, bulie ụlọ ọrụ ya. mezie ma melite ogo mbupụ ya. Obi siri anyị ike na anyị ga-enwe atụmanya dị egwu ma kesaa ya n’ụwa niile n’afọ ndị na-abịa.
Zute ma ọ bụ gafee ihe chọrọ nke AWWA C504 / C516.
Edị eccentric ugboro abụọ.
Ọdịdị siri ike.
Ihe mgbanaka oche nke roba jikọtara na diski ahụ.
Igwe anaghị agba nchara oche welded na ahụ.
Arịọnụ Flange dabere na MSS SP-102 ma ọ bụ ISO 5211.
Flange na mkpọpu ala kwekọrọ ASME B16.1 Class 125 / Class 250.
Ejiri onye na-arụ ọrụ gia.
150psi gosiri na -10 Celsius C na 120 Celsius C (14 Celsius F na 250 Celsius F) maka eriri EPDM.
150psi gosiri na-10 Celsius C na 82 Celsius C (14 Celsius F na 180 Celsius F) maka eriri BUNA-N.
NSF kwadoro njikọ njikọta ma ọ bụ ihe osise mmiri.
BUNA-N oche njikọ oche.
Ahụ ígwè ductile
Oche igwe anaghị agba nchara
Aro igwe anaghị agba nchara
Disc ígwè ductile
Nke gara aga: MJ Series raygba Mmiri Mmiri Valve
Osote: CH Standard Chemical Process mgbapụta
Nkedo Steel Ugboro abụọ Eccentric Butterfly Valve
Ugboro abụọ Ekwuru Okwu Butterfly Valve
9101A Ugboro abụọ Orifice Air Relief Valve
9709 Ugboro abụọ Orifice Air Relief Valve
Esorowo Steel Trunnion nọkwasịrị n'ịnyịnya n'ụzọ zuru ezu welded Ball ...